डेरामा एक्लै रहेको मौकामा सभामुख महराले जबरजस्ती गरेको आरोप !
काठमाडौँ, असोज १४ गते। संघीय संसद प्रतिनिधी सभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महरा माथि गम्भीर आरोप लागेको छ। संसद सचिवालयमै कार्यरत एक महिला कर्मचारीले आफूलाई सभामुख कृष्ण बहादुर महराले जबरजस्ती गरेको आरोप लगाएकी छन्। महराले संसद �
चुनौती र सम्भावनाबीच नेपाली डायस्पोरा
यस वर्षदेखि गैरआवासीय नेपाली अभियान १६ वर्षे लक्का जवान भएको छ । एउटा व्यक्तिको जीवनमा १६ वर्षको समय जति मह&OElig;वपूर्ण छ, संस्थाको जीवनमा अझ धेरै महत्वको हुने नै भयो । किनभने, संस्थाको १६ वर्ष भनेको यसमा आबद्ध हरेक सदस्यको १६ वर्�
शान्ति र सद्भावका लागि दलहरु इमान्दार हुनुपर्छ
लहान,असोज १३ गते। मुलुकमा दिगो शान्ति र सामाजिक सद्भाव स्थापनाका लागि राजनीतिक दलका नेताहरु इमान्दार र निष्ठावान हुनुपर्ने लहानमा आज सोमवार आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागिहरुले बताएका छन् । प्रो पब्लिकले लहानमा आयोजना गरेको द�
सत्तारुढ नेकपामा दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजनबारे कुरा नमिल्दा एकीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दाहालबीच पछिल्लो समय दिनहुँजसो एक�
प्रकाशित मितिः आश्विन 12, 2076
साझा पार्टी वाहेक अरुले देशमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने
रविन्द्र मिश्र सिरहा, ११ असोज । साझा पार्टी वाहेक अरु कुनै पार्टीले देशमा कुनै खासै परिवर्तन ल्याउन नसक्ने साझा पार्टीका केन्द्रिय संयोजक बताए । सिरहाको गोलबजारमा आयोजित सिरहा जिल्ला संयोजक घोषणा सभा तथा सम्वोधन कार्यक्रमला�
ओली सरकार अहिलेसम्मकै असफल : देउवा
काठमाडौँ, असोज १२ गते। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारका कारण महँगी अचाक्ली बढेको बताएका छन् । उनले महँगीका कारण आमजनताले दसैं, तिहार र छठजस्ता महत्त्वपूर्ण पर्व नै मनाउन नसक्ने स्थिति उत�
सीके राउतले पाए चुनाव चिन्ह ‘लाउड स्पीकर’ : घन्किएला त मधेशमा ?
जनकपुरधाम, १० असोज । विखण्डनकारी नारा त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आएका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले &lsquo;लाउड स्पीक&rsquo; चुनाव चिह्न पाएको छ ।आसन्न उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले नयाँ दर्ता भएका र नाम फेरिएका गरी २१ दललाई �
जनकपुरधाम, असोज १० गते। प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ। सुरक्षाको वर्तमान अवस्था र चुनौतीको विषयमा गोष्ठीमा छलफल हुने बताइएको छ। भोीलसम्म चल्ने गोष्ठीमा प्रदेश २ का आन्तरिक मामि
प्रदेशको नामाकरण नगरी अन्त्य भयो चौथो अधिवेशन
विराटनगर, असोज ०९ गते। १ नम्बर प्रदेशको नामाकरण गर्न नसक्दै प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन बुधबारदेखि अन्त्य भएको छ । यो अधिवेशनबाट पनि प्रदेशसभाको मुख्य कामको रूपमा रहेको प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकेको हो । प्रदेशको नामाकरणको विषय
कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा भएको फाइदा :‘सी विचारधारा’ को परीक्षण नेपालबाट
चीनले &lsquo;सी विचारधारा&rsquo;लाई लिएर विदेशी भूमिमा वैचारिक अन्तरक्रिर्या गर्ने क्रमको थालनी नेपालबाट गरेको छ । यस किसिमको विरलै हुने वैचारिक घनिष्ठता दुवै देशमा कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा रहेका बेला सम्भव भएको हो ।&nbsp; चिनियाँ रा�
राजपालाई मात्रै नभएर पुरै मधेशलाई क्षती भएको : राजेन्द्र महतो
सिरहा, असोज ०७ गते। राजपा नेपालका सिरहा जिल्ला अध्यक्ष स्व। श्री राम बहादुर महतोको निधनको १३ औँ दिनका पुण्यतिथीमा सिरहाको सुखीपुरमा श्रद्धान्जली सभा सम्पन्न भएको छ । स्वर्गीय राम बहादुर महतोे यस्तो नेता थियोे जसले आफनो जिवनम�
नेकपा र सीपीसी नेताहरुबीच छलफल : ‘सी विचारधारा’ को प्रशंसैप्रशंसा
काठमाडौँ, असोज ०७ गते। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका नेकपा नेताहरूले &lsquo;सी चिनफिङ विचारधारा&rsquo; लाई विकास, समृद्धि र शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने नयाँ अवधारणाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नेकपा र चिनि�
काठमाडौँ, असोज ५ गते। सत्तारूढ नेकपा सचिवालयको शनिबारको बैठकमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) सँगको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको प्रशिक्षण सम्मेलनका विषयमा छलफल भएको छ । बैठकमा पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख तथा सचिवालय सदस्�
काठमाडौं, असोज १ गते। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले अब कडा कदम चाल्ने बताएका छन्। सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा संघीय संसदको नयाँ भवनको शिलान्यास कार्य्रकममा बोल्दै प्रम ओलीले अब नबहकिइ विकास र स
गृहमन्त्रीका भाइको ‘हिरासत’ चिरायु अस्पताल
काठमाडौं, भदौ ३१ गते। पक्राउ परेदेखि नै बिरामी भएको भन्दै गृहमन्त्रीका साहिँला भाइ नरेशकुमार थापा बसुन्धरास्थित चिरायु अस्पतालमा भर्ना भएर बसेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०को आफ्नै हिरासत भए पनि चिकि�